Ny tranokalan-tany dia ny toerana izay ahafahanao mahatsapa tsara ny hevitrao sy ny hevitrao rehetra. Misy safidy maro amin'ny fomba handravahana na hanova tanteraka ny tanin'ny ordinatera. Ary dia tsy ho dacha fotsiny izy io, fa ny oasis tsy mahazatra sy manjelatra izay hahasarika ny havanao, olom-pantatra ary na ireo vahiny aza.
Ny iray amin'ireo safidy maro, ny fomba handravahana ny tranokalan'ny Villa, dia fefy vita amin'ny tavoahangy plastika, vita amin'ny tànana manokana. Ankoatra ny sanda ara-pananan-tseranana, dia misy fepetra azo ampiharina toy izany. Tahaka ny fefy rehetra, io tetikasa io dia miaro ny faritanin'ny vahiny tsy misy mpanatrika.
Fantatsika rehetra fa plastika dia fitaovana matanjaka sy matanjaka tsy azo zakaina mandritra ny fotoana lava ary azo tanterahina amin'ny tany mandritra ny fotoana maharitra. Tsy matahotra ny fahamendrehana izy, tsy misy masoandro, tsy misy rivotra. Noho izany, ireo mpanao asa tanana natsangany dia nanamboatra fefy misy tavoahangy plastika tsy ilaina.
Nandritra ny taona maromaro dia nanipika tavoahangy plastika izahay. Fa raha mamonjy azy ireo ianao, dia afaka manamboatra fehezanteny voajanahary, tsara tarehy sy tsara tarehy izy ireo. Io dia mety ho fehezam-boninkazo mamolavola ny fametrahana ny fandriana mirehitra, ary ny felana feno tanteraka amin'ny firenena.
Mba hanaovana fefy ho an'ny zavamaniry dia mila manapaka ny tavoahangy ianao ary mametraka azy tampoka eo amin'ny vakim-paritra manontolo eo amin'ny fandrianao. Ny tavoahangy vita amin'ny tavoahangy avy ao anaty dia afaka hosodoko amin'ny loko samihafa, avy eo io fefy io dia ho lasa manintona sy mahafinaritra.
Azonao atao ny manamboatra ny fefy efa vita amin'ny mesh-netting amin'ny tavoahangy plastika, nosoratana tamin'ny alokaloka samihafa. Amin'izany fomba izany, dia afaka manamboatra firavaka sy rafitra manontolo ianao eo amin'ny rafitra iray.
Andeha hojerentsika ny fomba fananganana fefy fàfana plastika plastika ao amin'ny firenena amin'ny tananao manokana.
Ny fanaovana fefy avy amin'ny tavoahangy dia mila ireto fitaovana manaraka ireto:
Tavoahangy plastika amin'ny habetsahana ilaina, tsara kokoa ny lokony sy ny haben'ny rehetra - roa litatra;
Fiatoana metaly mahery eo amin'ny 6 mm matevina;
ny biriky sy ny biriky ho an'ny hazo na metaly, ny haavony mitovy amin'ny haben'ny tady.
Voalohany indrindra, ny tavoahangy rehetra dia tokony hosasana tsara ary maina. Ny asa amin'ny fametrahana ny fefy amin'ny tanantsika manokana dia manomboka amin'ny famotehana ny ambany amin'ny tavoahangy. Amin'ity tranga ity dia misy tavoahangy dimy ampiasaina ho an'ny tsanganana iray. Ny haavon'ny tsangambato toy izany dia iray metatra. Ny efatra amin'ireo tavoahangy dimy amin'ny tendrontany no tapaka efatra, ary ny fahadimy - ny ambany indrindra - tokony ho eo ambany.
Ny tavoahangy misy ny ambany dia entin'ny tavoahangy sisa tavela. Ilaina àry ny mijery fa mifanindry ny fanamaivanana ireo tavoahangy.
Ankehitriny dia ilaina ny mandavaka ny lavaka eo afovoan 'ny elatra tsirairay. Ahodintsika ireo lavaka mitovy amin'ny tavoahangy amin'ny ambaratonga telo. Ataovy tsaratsara kokoa amin'ny asa fanaovan-draharaha ity, satria raha mampiasa fitaovana ianao, dia tsy mitovy ny haben'ny lavaka. Manasongadina ireo bara mitsambikimbikina eo amin'ny tady, manova ny tsirairay miaraka amin'ny teboka roa. Noho izany dia manangona ny andaniny manontolo amin'ny fefy izahay. Ny isa misy ny tsanganana ao anatin'ny andalan-tsoratra dia afaka manitsy ny tenanao araka ny elanelana misy eo amin'ireo andry.
Ho an'ireo andry vy metaly amin'ny tany, dia manamboatra ny sidina voangona avy amin'ny tavoahangy isika. Raha eny, tsy voatery ho vita amin'ny metaly ny lahatsoratra fanohanana, azonao atao ny manamboatra hazo. Ao amin'ny tsanganana tsirairay dia misy lavaka boribory eo amin'ny andaniny roa. Ampidirinay ao anaty lavaka ny tady, izay atahorana ireo tavoahangy, ary apetraho amin'ny lafiny roa miaraka amin'ny fanampian'ny voanjo.
Toy izao ny fomba fijery vita amin'ny tavoahangy plastika, noforonin'ny tenanao, hijery.
Birao misy rindrina
Karipetra ho an'ny ankizy - ny fomba hisafidianana ny fitaovana maoderina sy ny endrika tsara?
Toby ambony vita amin'ny boaty kely
Ahoana no fomba handravahana ny efitrano?
Fametrahana panamboarana angovo PVC
Kitapo felana fanorenana anatiny
Fanamboarana trano fianarana trano
Ahoana no ahantona takela-kazo ho an'ny ridao eo amin'ny rindrina?
Transformers ho an'ny latabatra fisakafoana
Fonony - famantarana ny ririnina
Ny akanjom-behivavy - ireo modely tsara tarehy sy mahazendana
Masoandro amin'ny akanjo amin'ny koketa
Creatin monohydrate: ny vokany
Fitaovana fanakona amin'ny eyelets
Volombava miaraka amin'ny amethyst
Ny mason'olon-kiraro - iza no mendrika sy ny fomba fanaovana kavina lamaody-pridevki?
Ashton Kutcher dia nizara tamin'ny mpankafy sary iray mahatsikaiky sy mahalana miaraka amin'ny zanany lahy
Ny Magic Magic ho an'ny Kitchen
Tazo tomato ho an'ny fahavoazana
Pamela Anderson dia naneho ny endrika sangisangy tao anatinà dokambarotra an-tsokosoko
Ahoana ny fomba hanamboarana lasopy bean?
Akanjo fohy 2017 - lamaody lamaody, fironana, vaovao, vahaolana mahaliana
Sakafo maina ho an'ny saka mihetsiketsika
Volo haingana ho an'ny volo midadasika
35 tranga mampihomehy, rehefa tsy nahavita namorona sangan'asan'ny tanany